I-Storemyr - ekwiimitha eziyi-1060, ekwindawo entle - I-Airbnb
I-Storemyr - ekwiimitha eziyi-1060, ekwindawo entle
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguNorgesbooking AS
UNorgesbooking AS unezimvo eziyi-124 zezinye iindawo.
Indlu yamaplanga eHolsåsen, ekwikhilomitha eziyi-17 ukusuka eGeilo. I-Storemyr ikwiimitha eziyi-1060, ikwindawo entle. Umgama omfutshane wokuwela imizila yelizwe ebusika, kunye neendawo zokunyuka intaba ehlotyeni. Indawo ethe cwaka nelungele intsapho. Le ndlu yamaplanga inamagumbi okuhlambela ayi-2. Izinto ezenziwayo/ezinomtsalane kule ndawo:
< br > Le ndlu yamaplanga ikwindawo ephezulu eHongingdal apho unokufumana izinto ezininzi ezonwabisayo nenkcubeko unyaka wonke. Ngokomzekelo, i-Geilo, i- Hallingdal Feriepark (ipaki yeholide) e- Řl, i-Hol Cheese Factory ethengisa iimveliso zasekuhlaleni, i-Langedrag (ipaki yendalo), i-Hongingskarvet Fjellbad (ipuli yangaphakathi), ivula iifama zasehlotyeni kunye nokuloba.
Kukho iindawo ezininzi zokunyuka intaba ehlotyeni kunye nokutyibilika ekhephini ebusika. Ehlotyeni unokuqhuba ecaleni kwendlela yeValdsetvegen ukuya eVats kodwa ke ngexesha lasebusika indlela ivulekile kuphela ukuya kutsho kwiStoremyr.
< br > Ukuloba kule ndawo: Kukho indawo elinganiselweyo yokuloba eHolsåsen, kodwa ungathenga ilayisensi yokuloba kwiHolsfjorden, Hallingdalselva kunye neBergsjøområdet. < br > Amagumbi okulala: < br > Igumbi lokulala eliyi-1: Ibhedi elala abantu ababini 150 cm < br > Igumbi lokulala 2: Ibhedi yosapho (120/90 cm) < br > Igumbi lokulala 3: Ibhedi yosapho (120/90 cm) < br > Igumbi lokulala 4: Ibhedi yosapho (150/90 cm) < br > Kukho ibhedi eyisofa kwigumbi lokuhlala kwi-loft, enokusetyenziswa ngabantu abayi-1 ukuya kwabayi-1 ukuya kwabayi-2 (120 cm). Le ndlu yamaplanga inamagumbi okuhlambela ayi-2. < br > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
Umbuki zindwendwe ngu- Norgesbooking AS